EVY's Kitchen: ငါးအချိုပေါင်း
ငါးဆိုရင် အိမ်မှာသိပ်ချက်လေ့မရှိပါဘူး။ ငါးဟင်းလည်း သိပ်မကြိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှ ချက်လေ့ရှိတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ငါးပေါင်းလုပ်နည်းလေးရထားတာနဲ့ လုပ်စားကြည့်လိုက်တာ တော်တော်လွယ်ပြီး အရသာရှိပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ အဲဒီငါးပေါင်းထဲက ဆော့စ်ချိုချိုငံငံကို ကြိုက်လို့ လုပ်နည်းရှာနေတာကြာပါပြီ။ ခုမှပဲ ရတော့တယ်
တီလားပီးယားငါးကိုပေါင်းထားတာပါ။ အရိုးနည်းတဲ့ တခြားငါး ဥပမာ Yellow Tail Fusilier (ဗမာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိ) ငါးကိုသုံးလည်း ရပါတယ်။ သူက ပိုတောင် အသားများပြီး ချိုသလိုပဲ။ အိမ်မှာတော့ ပထမတစ်ခါလုပ်စားပြီးလို့ ကြိုက်လို့ထပ်လုပ်စားဖြစ်တော့ ဓာတ်ပုံတော့ မရိုက်ထားလိုက်ဘူး။ နောက်လည်း ခဏခဏလုပ်စားဖြစ်မယ့် ဟင်းတစ်မျိုးပါ။
ပထမဆုံးငါးကို အနံ့ပျောက်အောင် မန်ကျည်းမှည့်နဲ့ သေချာဆေးပါတယ်။ ပြီးရင် ငါးပေါင်းမယ့် ပန်းကန်ထဲမှာထည့် Chinese Cooking Wine တစ်ဇွန်းကို ငါးပေါ်လောင်း၊ ဂျင်းပါးပါးလှီးတာကို ငါးပေါ်တင်ပြီး ၆-၈ မိနစ်လောက်ပေါင်းပါတယ်။ ငါးပေါင်းနေတုန်းမှာ sauce ကိုပြင်ပါမယ်
ပဲငံပျာရည် အကြည်- စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
ဟင်းချက်ဝိုင်ဖြူ (တရုပ်တွေသုံးလေ့ရှိတဲ့ ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဝိုင်ပါ) - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ရေ - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
သကြား -လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း (ဒါက မိမိကြိုက်သလိုလိုတိုး ပိုလျော့လုပ်ပါ)
ငါးရပြီ ဆိုရင် ငါးကထွက်လာတဲ့ရေတွေ အားလုံးကို သွန်ပြစ်ရပါမယ်။ မနှမြောပါနဲ့။ နို့မို့ဆို ငါးညှီနံ့ရရင် စားလို့မကောင်းပါဘူး။ တင်ထားတဲ့ ဂျင်းတွေကိုလည်း ပြစ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဆီစားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်းကို အပူပေးပြီး ငါးပေါ်ကိုလောင်းလိုက်ပါ။ (အရောင်စိုစိုလေးနဲ့ ပိုပြီး လှစေတယ်ပြောတာပဲ)
အဲဒီ ဆီအိုးကို သုံးပြီး ခုနကရောထားတဲ့ ဆော့စ်ကို ဆူအောင် အပူပေးပါ။ ဂျင်းကို လည်း ပါးပါးလှီးပြီး ဆော့စ်ထဲကို ထည့်ပါ။
ဆူတာနဲ့ ငါးပေါ်လောင်းပြီး ထမင်းပူပူလေးနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ ချက်ခြင်းစားမှကောင်းမှာပါ။ အေးသွားရင်မကောင်းပါဘူး။
အိမ်မှာသုံးတဲ့ Rice Wine ပါ ( Courtesy of Google Image)
Posted by Evy at 7:01 PM
Labels: Cooking, Fish, Main Dish, seafood
ငါးအချိုပေါင်းလေး လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်.. ငါးကြိုက်တာနဲ့ အတော်ပဲ.. ကျေးဇူးနော်..
လှလှလဲ စားလို့လည်းကောင်း နေမယ်နော်
ငါးဟင်းကို ဘယ်လိုချက်ချက် ကြိုက်တယ်။ အစ်မငါးပေါင်းလေး တစ်ရက်လောက် လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်။ စားကောင်းမယ့်ပုံလေး။
တရုတ်ဝိုင် ဆိုတာလေးကို ပုံနဲ့ ပြပေးနိုင်မလားရှင်...
ကောင်းပါတယ် မမဘေဘီရေ။ ခုမှ ဟင်းပြန်ချက်နိုင်တယ် :)
Anonymous=> rice wine ပုံကိုထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပြီနော်
i tried both fishes as per ur recipe.
really amazing and no fish smell anyone.
"now i become one of ur regular customers" :P
စားကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ လုပ်နည်းသိချင်နေတာကြာပြီ။ ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်။ ငါးက်ို ဘာနဲ့ပေါင်းရတာလဲဟင်။ ovenနဲ့လား။ ဟင်းချက်တဲ့အိုးနဲ့လားဟင်။ တစ်ခါမှ မချက်ဘူးလို့ပါနော်။
ရိုးရိုးgas မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးဒယ်အိုးကျိုပြီး ငါးပန်းကန်ကိုထည့်ပေါင်းတာပါ
thanksalot Ma Ma Evy :)
Thank you, Evy, for this! I cannot eat hot stuff anymore (tummy getting old) so this is great.
Thanksalot ur receipe.
ငါးအချိုပေါင်းနည်းလေး မှတ်သွားပါတယ် လုပ်နည်းလေးက လွယ်တယ်နော် စားလို့လဲကောင်းမဲ့ပုံပဲ...
Thanks for yr sharing. sis :)
ဂျုံပူတင်း / Egg Pudding (with flour )